တစ်ပတ်ရစ်ဈေးကွက်မှာ ဒီဂျစ်တယ်ကင်မရာတွေ ပြန်ဝယ်ကြမယ့်သူတွေအတွက် အကြံပြုချက် ၇ ခု – ADS Myanmar Blog
တစ်ပတ်ရစ်ဈေးကွက်မှာ ဒီဂျစ်တယ်ကင်မရာတွေ ပြန်ဝယ်ကြမယ့်သူတွေအတွက် အကြံပြုချက် ၇ ခု
Digital SLR ကင်မရာတွေကို ထုတ်လုပ်သူတွေဘက်ကနေ မကြာခဏဆိုသလို ထုတ်လုပ်နေတာကြောင့် ဓါတ်ပုံဆရာတော် တော်များများဟာ သူတို့ကင်မရာတွေကို မကြာခဏဆိုလို၊ နောက်ဆုံးပေါ် အကောင်းဆုံးတွေနဲ့ လဲလှယ်ပြီး ကိုင်တွယ်အသုံး ပြုတတ်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း တပတ်ရစ်ကင်မရာဈေးကွက်ဟာ ရောင်းသူဝယ်သူတွေ များပြားပြီး ဈေးနှုန်းအမျိုးမျိုး၊ ကင်မရာရဲ့ အခြေအနေအမျိုးမျိုးနဲ့ စုံလင်အောင်ရှိနေတဲ့ ဈေးကွက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီတစ်ခေါက်မှာ တစ်ပတ် ရစ်ဈေးကွက်ကနေ ကင်မရာဝယ်ယူလိုတဲ့သူတွေအတွက် အသုံးဝင်နိုင်မယ့်အကြံဥာဏ်တချို့ကို ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။
၁. Shutter count အရေအတွက်ကို စစ်ဆေးပါ။
SLR တိုင်းမှာ ကင်မရာတစ်ခုလုံးရဲ့ စက်အစိတ်အပိုင်းတွေ ပြန်လဲဖို့လိုလာတဲ့ အချိန်မရောက်ခင်အချိန်အတွင်းမှာ အသုံးပြု နိုင် အဖွင့်အပိတ်အကြိမ်ရေက အကန့်အသတ် ရှိပါတယ်။ ထုတ်လုပ်တဲ့သူတွေဘက်က ဒီ shutter count ကို သူတို့ web site တွေမှာ ဖော်ပြပေးတတ်တာမို့၊ ကိုယ်ဝယ်မယ့် ကင်မရာရဲ့ မိုဒယ်နဲ့တိုက်ဆိုင်ပြီး အသုံးပြုနိုင်မှာပါ။ ဒါကြောင့် ကင်မရာ ဝယ်ပြီးဆိုရင် မဖြစ်မနေစစ်ဆေးသင့်တာက shutter count ဖြစ်လာပါတယ်။
အလွယ်ဆုံးနည်းကတော့ ကင်မရာတွေမှာ ဒီကင်မရာနဲ့ ပုံဘယ်နှစ်ပုံရိုက်ပြီးပြီဆိုတာ ပြပေးတဲ့ setting ပါလာတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ခက်တာက တစ်ချို့ကင်မရာတွေမှာက ဒီနံပါတ်ကို ပြန်ပြီး reset လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒါကိုချည်းပဲ ယုံ ကြည့်လို့တော့မရပါဘူး။ ဒါကြောင့်မို့လို့ third-party program ကို အသုံးပြုဖို့လိုပါမယ်။ Canon သမားတွေဆိုရင်တော့ EOSInfo ကို သုံးနိုင်ပြီး၊ Nikon နဲ့ Pentax သမားတွေကတော့ ကင်မရာနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ အထဲက NEF ဒါမှမဟုတ် DNG file တွေကို myshuttercount.com မှာ သွားပြီး upload တင်ပြီး စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီမှာမှ ကင်မရာရဲ့ နဂိုမူရင်း Shutter count ရယ်၊ ရိုက်ထားတဲ့ အရေအတွက်ရယ်၊ ဘယ်လောက်ထပ်ရိုက်လိုက်လို့ရဦးမယ်ဆိုတာတွေကို ခန့်မှန်းတွက်ချက်နိုင်မှာ ပါ။ နောက်ထပ် shutter နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ပြောဖို့ကျန်တာက ကင်မရာကို မဝယ်ခင် shutter speed ကို အမျိုးမျိုးချိန်ပြီး တော့ လေး၊ ငါးပုံလောက်ရိုက်ကြည့်ဖို့ပါပဲ၊ shutter အဖွင့်အပိတ်အသံက ညက်ညောမှုရှိရမယ်၊ jam ဖြစ်နေတာတို့၊ တစ်ခုခု ထစ်နေတာမျိုးတို့ မရှိရပါဘူး။
၂. Sensor ကို စစ်ဆေးပါ။
Sensor ပြဿနာကို စစ်ဆေးဖို့အတွက်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့က အရမ်းလင်းတဲ့နေရာတစ်ခုကို ရိုက်ကူးကြည့်လိုက်ပါ။ ဥပမာ လင်းနေတဲ့ကောင်းကင်ပြင်ကြီးတို့၊ နံရံအဖြူကြီးတို့ကို aperture အနည်းဆုံးနဲ့ ရိုက်ကူးပါ။ ပြီးသွားရင် ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ ပုံ ကို Zoom ပြန်ချဲ့ပြီး၊ ဖုန်တွေကပ်နေလို့ sensor က မဖတ်လိုက်နိုင်တဲ့ နေရာမျိုးတွေကို ရှာပါ။ နောက်တစ်ခါ lens cap တပ် ထားပြီး တစ်ပုံရိုက်ပြီး၊ ပြီးရင်အရင်ရိုက်ထားတဲ့ပုံနဲ့ ပြန်ယှဉ်ပြီး ပြဿနာဖြစ်နိုင်တဲ့နေရာတွေကို ရှာပေးပါ။ နောက်တစ်ခုက Sensor ကို မျက်စိအမြင်နဲ့ကြည့်တာပါ။ camera menu ထဲမှာ မှန်ကိုမလိုက်ပြီး sensor ကို မြင်ရစေမယ့် option ပါလာတတ်ပါတယ်။ ဖုန်တွေလောက်က အလွယ်တကူရှင်းနိုင်ပေမယ့်၊ ခြစ်ရာပွန်းရာတွေ ရှိနေတယ်ဆိုရင်တော့ အဆင်မပြေပါဘူး။
၃. Lens တွေကလည်း အရေးပါပါတယ်။
အရစ်ကျကင်မရာတွေ ဝယ်တဲ့အခါမှာ lens တွေ ပါလာဖို့ ခက်ခဲတတ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ကိုယ့်မှာ lens တွေ ရှိပြီးသားဆို ရင် ပြဿနာမရှိပေမယ့်၊ တကယ်လို့ အသစ်ဝယ်ဖို့လိုတယ်ဆိုရင် ဒီကအကြံပြုချက်က အသုံးဝင်လာမှာပါ။ တကယ်လို့ entry-level DSLR တွေ ဝယ်မယ်ဆိုရင် ကင်မရာ body နဲ့အတူ Lens kit ပါ ပါလာတတ်ပါတယ်။ အဓိကစစ်ဆေးရမှာက ခြစ်ရာ၊ အဆင်းရာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ manual aperture ring ပါလာရင် လှည့်ရတာအဆင်ပြေမပြေ စစ်ပါ။ နောက်ဖြစ်နိုင်ရင် အဲဒီ lens နဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ filter တွေကို တပ်ကြည့်ပါ။ Lens တွေရဲ့ အဓိကပြဿနာက မှိုတက်တဲ့ ပြဿနာပါ။ တချို့အခြေအနေတွေမှာ ဒီကိစ္စက lens ကို ဆိုးဆိုးရွားရွား ပျက်ဆီးစေပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် ရောင်းတဲ့သူအ နေနဲ့ Lens တွေကို ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းတယ်ဆိုတာကို လေ့လာထားတာ မမှားပါဘူး။
၄. LCD ကိုလည်း ဂရုစိုက်သင့်တယ်။
ကင်မရာရဲ့ LCD ဟာ ဒီကင်မရာကို အသုံးပြုနေတုန်းမှာ အဓိကထိတွေ့ရတဲ့ အစိတ်အပိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် dead pixels တွေ ရှိနေသလား၊ ပလတ်စတစ်အကာမှာ ကွဲနေတာမျိုးရှိလား၊ အရောင်မမှန်တာတွေရှိလားဆိုတာကို ဂရုစိုက်သင့် ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက ချောင်းကြည့်ပေါက် optical viewfinder ကိုလည်း ဂရုစိုက်ရမယ်၊ အဆင်းရာတွေရှိလား၊ ဖုန်တွေ ကပ်နေလားပေါ့။ ပုံမှန်အားဖြင့် ဒီမှန်ကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့က ကိုယ်တိုင်လုပ်လို့မရပဲ ဆိုင်မှာမှလုပ်နိုင်တာပါ။ ဒါကိုစစ်ဖို့အ တွက်က ကင်မရာကို lens ဖြုတ်ပြီး အလင်းရောင်ကောင်းတဲဘက်ကို မျက်နှာမူကြည့်ရင်ရပါတယ်။ ဒါဆိုရင် အမှုန်အမွှားနဲ့ အဆင်းရာတွေ ကပ်နေတာကို မြင်ရမှာပါ။
၅. ပွန်းရာပဲ့ရာ ခြစ်ရာဆင်းရာများ
အွန်လိုင်း တပတ်ရစ် website တွေကို သုံးတယ်ဆိုရင်၊ ရောင်းမယ့်သူက တင်ထားတဲ့ဓါတ်ပုံကို သေချာစစ်ဆေးဖို့ လိုပါလိမ့် မယ်။ နောက်တစ်ခုက ပြန်ရောင်းတဲ့သူကို သူရိုက်ထားတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေရှိရင် ပြဖို့ ပြောကြည့်ပါ။ အဲဒီပုံတွေထဲမှာ ပင်လယ်ကမ်း ခြေနားမှာရိုက်ထားတာများတယ်၊ စိုစွတ်တဲ့ရာသီတွေမှာ ရိုက်တာများတယ်ဆိုတာတွေ တွေ့လာရရင်၊ ဒီကင်မရာဟာ အကြမ်းသုံးထားတာပဲဆိုတာ ခန့်မှန်းနိုင်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက ခလုတ်တွေကို ဘယ်လောက်သုံးထားသလဲပေါ့။ ပုံမှန် အားဖြင့် ခလုပ်တွေပေါ်က icon လေးတွေ၊ logo လေးတွေ ပျက်နေမယ်၊ လက်နဲ့နှိပ်ထားလို့ အရာတွေပေါ်နေမယ်ဆိုရင် ဒါ လုံးဝအလုံးသန့်လို့ ပြောမရတော့ပါဘူး။ တကယ်လို့ lens နဲ့ချိတ်ကြည်လို့ အဆင်ပြေပြေဖြစ်ရဲ့လားဆိုတာလည်း စမ်းတပ် ကြည့်ဖို့ လိုမှာပါ။
၆. အပိုပစ္စည်းများကို စစ်ဆေးပါ။
တကယ်လို့ ပြန်ရောင်းသူအနေနဲ့ သူဝယ်တုန်းကတည်းက ရလာတဲ့ စာရွက်စာတမ်းတွေကို အခုအချိန်အထိ သိမ်းထားသေး တယ်ဆိုရင် တကယ့်ကိုရွှေပါပဲ။ ဘက်ထရီအားသွင်းစက်တွေ၊ ကင်မရာထည့်တဲ့အိတ်လိုမျိုးတွေ၊ ကွန်ပျူတာနဲ့ချိတ်ဆက်တဲ့ နေရာမှာသုံးတဲ့ ကြိုးတွေဟာ မူရင်းကို သုံးနိုင်ရင်အကောင်းဆုံးပါပဲ။ ဒါပေမယ့် တစ်ခါတစ်လေတော့လည်း ပြန်ရောင်းသူတွေ က သူတို့ဒီကင်မရာနဲ့ တွဲသုံးခဲ့တဲ့ SD card တွေ၊ ဘက်ထရီအပိုတွေ၊ filter တွေကိုပါ တွဲပြီးရောင်းတတ်ကြတာမျိုးလည်း ရှိ ပါတယ်။
၇. အာမခံသက်တမ်းကလည်း စဉ်းစားစရာပါ။
ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ တစ်ပတ်ရစ်ဈေးကွက်မှာ ကင်မရာဝယ်ရင် အာမခံသက်တမ်းကုန်နေပြီးသားတွေပဲ ရောင်းကြပါတယ်။ ဒါ ပေမယ့် တကယ်လို့ အာမခံသက်တမ်းရှိနေသေးတုန်းမှာဆိုရင်တော့ ဒီအာမခံသက်တမ်းဟာ ကိုယ့်အတွက် အဆင်ပြေရဲ့ လားဆိုတာကို ကြည့်ရမှာပါ။ တစ်ခါတစ်ခါကြရင် အာမခံဟာ ထုတ်တဲ့ကုမ္ပဏီက ပေးတယ်ဆိုတာထက် ဒီကင်မရာကို ယူ ရောင်းတဲ့ ဆိုင်က ပေးတာမျိုး ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဥပမာစင်ကာပူကဝယ်လာတဲ့ ကင်မရာကို တခြားနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာ ပြင်မယ် ဆိုရင် အာမခံမရတာမျိုး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အာမခံသက်တမ်းကျန်သေးတယ်ဆိုတိုင်း အရမ်းမဝယ်ပဲ သေချာလေ့ လာကြည့်ဖို့ လိုပါမယ်။
​ တဈပတျရဈစြေးကှကျမှာ ဒီဂဈြတယျကငျမရာတှေ ပွနျဝယျကွမယျ့သူတှအေတှကျ အကွံပွုခကျြ ရ ခု
Digital SLR ကငျမရာတှကေို ထုတျလုပျသူတှဘေကျကနေ မကွာခဏဆိုသလို ထုတျလုပျနတောကွောငျ့ ဓါတျပုံဆရာတျော တျောမြားမြားဟာ သူတို့ကငျမရာတှကေို မကွာခဏဆိုလို၊ နောကျဆုံးပျေါ အကောငျးဆုံးတှနေဲ့ လဲလှယျပွီး ကိုငျတှယျအသုံး ပွုတတျကွပါတယျ။ ဒါကွောငျ့လညျး တပတျရဈကငျမရာစြေးကှကျဟာ ရောငျးသူဝယျသူတှေ မြားပွားပွီး စြေးနှုနျးအမြိုးမြိုး၊ ကငျမရာရဲ့ အခွအေနအေမြိုးမြိုးနဲ့ စုံလငျအောငျရှိနတေဲ့ စြေးကှကျလညျး ဖွဈပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ဒီတဈခေါကျမှာ တဈပတျ ရဈစြေးကှကျကနေ ကငျမရာဝယျယူလိုတဲ့သူတှအေတှကျ အသုံးဝငျနိုငျမယျ့အကွံဉာဏျတခြို့ကို ဖျောပွပေးခငျြပါတယျ။
၁. Shutter count အရအေတှကျကို စဈဆေးပါ။
SLR တိုငျးမှာ ကငျမရာတဈခုလုံးရဲ့ စကျအစိတျအပိုငျးတှေ ပွနျလဲဖို့လိုလာတဲ့ အခြိနျမရောကျခငျအခြိနျအတှငျးမှာ အသုံးပွု နိုငျ အဖှငျ့အပိတျအကွိမျရကေ အကနျ့အသတျ ရှိပါတယျ။ ထုတျလုပျတဲ့သူတှဘေကျက ဒီ shutter count ကို သူတို့ web site တှမှော ဖျောပွပေးတတျတာမို့၊ ကိုယျဝယျမယျ့ ကငျမရာရဲ့ မိုဒယျနဲ့တိုကျဆိုငျပွီး အသုံးပွုနိုငျမှာပါ။ ဒါကွောငျ့ ကငျမရာ ဝယျပွီးဆိုရငျ မဖွဈမနစေဈဆေးသငျ့တာက shutter count ဖွဈလာပါတယျ။
အလှယျဆုံးနညျးကတော့ ကငျမရာတှမှော ဒီကငျမရာနဲ့ ပုံဘယျနှဈပုံရိုကျပွီးပွီဆိုတာ ပွပေးတဲ့ setting ပါလာတတျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ခကျတာက တဈခြို့ကငျမရာတှမှောက ဒီနံပါတျကို ပွနျပွီး reset လုပျပေးနိုငျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ဒါကိုခညျြးပဲ ယုံ ကွညျ့လို့တော့မရပါဘူး။ ဒါကွောငျ့မို့လို့ third-party program ကို အသုံးပွုဖို့လိုပါမယျ။ Canon သမားတှဆေိုရငျတော့ EOSInfo ကို သုံးနိုငျပွီး၊ Nikon နဲ့ Pentax သမားတှကေတော့ ကငျမရာနဲ့ရိုကျထားတဲ့ အထဲက NEF ဒါမှမဟုတျ DNG file တှကေို myshuttercount.com မှာ သှားပွီး upload တငျပွီး စဈဆေးနိုငျပါတယျ။ အဲဒီမှာမှ ကငျမရာရဲ့ နဂိုမူရငျး Shutter count ရယျ၊ ရိုကျထားတဲ့ အရအေတှကျရယျ၊ ဘယျလောကျထပျရိုကျလိုကျလို့ရဦးမယျဆိုတာတှကေို ခနျ့မှနျးတှကျခကျြနိုငျမှာ ပါ။ နောကျထပျ shutter နဲ့ ပတျသကျပွီးတော့ ပွောဖို့ကနျြတာက ကငျမရာကို မဝယျခငျ shutter speed ကို အမြိုးမြိုးခြိနျပွီး တော့ လေး၊ ငါးပုံလောကျရိုကျကွညျ့ဖို့ပါပဲ၊ shutter အဖှငျ့အပိတျအသံက ညကျညောမှုရှိရမယျ၊ jam ဖွဈနတောတို့၊ တဈခုခု ထဈနတောမြိုးတို့ မရှိရပါဘူး။
၂. Sensor ကို စဈဆေးပါ။
Sensor ပွဿနာကို စဈဆေးဖို့အတှကျဆိုရငျ ကြှနျတျောတို့က အရမျးလငျးတဲ့နရောတဈခုကို ရိုကျကူးကွညျ့လိုကျပါ။ ဥပမာ လငျးနတေဲ့ကောငျးကငျပွငျကွီးတို့၊ နံရံအဖွူကွီးတို့ကို aperture အနညျးဆုံးနဲ့ ရိုကျကူးပါ။ ပွီးသှားရငျ ကှနျပြူတာပျေါမှာ ပုံ ကို Zoom ပွနျခြဲ့ပွီး၊ ဖုနျတှကေပျနလေို့ sensor က မဖတျလိုကျနိုငျတဲ့ နရောမြိုးတှကေို ရှာပါ။ နောကျတဈခါ lens cap တပျ ထားပွီး တဈပုံရိုကျပွီး၊ ပွီးရငျအရငျရိုကျထားတဲ့ပုံနဲ့ ပွနျယှဉျပွီး ပွဿနာဖွဈနိုငျတဲ့နရောတှကေို ရှာပေးပါ။ နောကျတဈခုက Sensor ကို မကျြစိအမွငျနဲ့ကွညျ့တာပါ။ camera menu ထဲမှာ မှနျကိုမလိုကျပွီး sensor ကို မွငျရစမေယျ့ option ပါလာတတျပါတယျ။ ဖုနျတှလေောကျက အလှယျတကူရှငျးနိုငျပမေယျ့၊ ခွဈရာပှနျးရာတှေ ရှိနတေယျဆိုရငျတော့ အဆငျမပွပေါဘူး။
၃. Lens တှကေလညျး အရေးပါပါတယျ။
အရဈကကြငျမရာတှေ ဝယျတဲ့အခါမှာ lens တှေ ပါလာဖို့ ခကျခဲတတျပါတယျ။ တကယျလို့ ကိုယျ့မှာ lens တှေ ရှိပွီးသားဆို ရငျ ပွဿနာမရှိပမေယျ့၊ တကယျလို့ အသဈဝယျဖို့လိုတယျဆိုရငျ ဒီကအကွံပွုခကျြက အသုံးဝငျလာမှာပါ။ တကယျလို့ entry-level DSLR တှေ ဝယျမယျဆိုရငျ ကငျမရာ body နဲ့အတူ Lens kit ပါ ပါလာတတျပါတယျ။ အဓိကစဈဆေးရမှာက ခွဈရာ၊ အဆငျးရာတှေ ဖွဈပါတယျ။ တကယျလို့ manual aperture ring ပါလာရငျ လှညျ့ရတာအဆငျပွမေပွေ စဈပါ။ နောကျဖွဈနိုငျရငျ အဲဒီ lens နဲ့ ကိုကျညီတဲ့ filter တှကေို တပျကွညျ့ပါ။ Lens တှရေဲ့ အဓိကပွဿနာက မှိုတကျတဲ့ ပွဿနာပါ။ တခြို့အခွအေနတှေမှော ဒီကိစ်စက lens ကို ဆိုးဆိုးရှားရှား ပကျြဆီးစပေါလိမျ့မယျ။ ဒါကွောငျ့ ရောငျးတဲ့သူအ နနေဲ့ Lens တှကေို ဘယျလိုထိနျးသိမျးတယျဆိုတာကို လလေ့ာထားတာ မမှားပါဘူး။
၄. LCD ကိုလညျး ဂရုစိုကျသငျ့တယျ။
ကငျမရာရဲ့ LCD ဟာ ဒီကငျမရာကို အသုံးပွုနတေုနျးမှာ အဓိကထိတှရေ့တဲ့ အစိတျအပိုငျး ဖွဈပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ dead pixels တှေ ရှိနသေလား၊ ပလတျစတဈအကာမှာ ကှဲနတောမြိုးရှိလား၊ အရောငျမမှနျတာတှရှေိလားဆိုတာကို ဂရုစိုကျသငျ့ ပါတယျ။ နောကျတဈခုက ခြောငျးကွညျ့ပေါကျ optical viewfinder ကိုလညျး ဂရုစိုကျရမယျ၊ အဆငျးရာတှရှေိလား၊ ဖုနျတှေ ကပျနလေားပေါ့။ ပုံမှနျအားဖွငျ့ ဒီမှနျကို သနျ့ရှငျးရေးလုပျဖို့က ကိုယျတိုငျလုပျလို့မရပဲ ဆိုငျမှာမှလုပျနိုငျတာပါ။ ဒါကိုစဈဖို့အ တှကျက ကငျမရာကို lens ဖွုတျပွီး အလငျးရောငျကောငျးတဲဘကျကို မကျြနှာမူကွညျ့ရငျရပါတယျ။ ဒါဆိုရငျ အမှုနျအမှားနဲ့ အဆငျးရာတှေ ကပျနတောကို မွငျရမှာပါ။
၅. ပှနျးရာပဲ့ရာ ခွဈရာဆငျးရာမြား
အှနျလိုငျး တပတျရဈ website တှကေို သုံးတယျဆိုရငျ၊ ရောငျးမယျ့သူက တငျထားတဲ့ဓါတျပုံကို သခြောစဈဆေးဖို့ လိုပါလိမျ့ မယျ။ နောကျတဈခုက ပွနျရောငျးတဲ့သူကို သူရိုကျထားတဲ့ ဓါတျပုံတှရှေိရငျ ပွဖို့ ပွောကွညျ့ပါ။ အဲဒီပုံတှထေဲမှာ ပငျလယျကမျး ခွနေားမှာရိုကျထားတာမြားတယျ၊ စိုစှတျတဲ့ရာသီတှမှော ရိုကျတာမြားတယျဆိုတာတှေ တှလေ့ာရရငျ၊ ဒီကငျမရာဟာ အကွမျးသုံးထားတာပဲဆိုတာ ခနျ့မှနျးနိုငျပါတယျ။ နောကျတဈခုက ခလုတျတှကေို ဘယျလောကျသုံးထားသလဲပေါ့။ ပုံမှနျ အားဖွငျ့ ခလုပျတှပေျေါက icon လေးတှေ၊ logo လေးတှေ ပကျြနမေယျ၊ လကျနဲ့နှိပျထားလို့ အရာတှပေျေါနမေယျဆိုရငျ ဒါ လုံးဝအလုံးသနျ့လို့ ပွောမရတော့ပါဘူး။ တကယျလို့ lens နဲ့ခြိတျကွညျလို့ အဆငျပွပွေဖွေဈရဲ့လားဆိုတာလညျး စမျးတပျ ကွညျ့ဖို့ လိုမှာပါ။
၆. အပိုပစ်စညျးမြားကို စဈဆေးပါ။
တကယျလို့ ပွနျရောငျးသူအနနေဲ့ သူဝယျတုနျးကတညျးက ရလာတဲ့ စာရှကျစာတမျးတှကေို အခုအခြိနျအထိ သိမျးထားသေး တယျဆိုရငျ တကယျ့ကိုရှပေါပဲ။ ဘကျထရီအားသှငျးစကျတှေ၊ ကငျမရာထညျ့တဲ့အိတျလိုမြိုးတှေ၊ ကှနျပြူတာနဲ့ခြိတျဆကျတဲ့ နရောမှာသုံးတဲ့ ကွိုးတှဟော မူရငျးကို သုံးနိုငျရငျအကောငျးဆုံးပါပဲ။ ဒါပမေယျ့ တဈခါတဈလတေော့လညျး ပွနျရောငျးသူတှေ က သူတို့ဒီကငျမရာနဲ့ တှဲသုံးခဲ့တဲ့ SD card တှေ၊ ဘကျထရီအပိုတှေ၊ filter တှကေိုပါ တှဲပွီးရောငျးတတျကွတာမြိုးလညျး ရှိ ပါတယျ။
၇. အာမခံသကျတမျးကလညျး စဉျးစားစရာပါ။
ပုံမှနျအားဖွငျ့တော့ တဈပတျရဈစြေးကှကျမှာ ကငျမရာဝယျရငျ အာမခံသကျတမျးကုနျနပွေီးသားတှပေဲ ရောငျးကွပါတယျ။ ဒါ ပမေယျ့ တကယျလို့ အာမခံသကျတမျးရှိနသေေးတုနျးမှာဆိုရငျတော့ ဒီအာမခံသကျတမျးဟာ ကိုယျ့အတှကျ အဆငျပွရေဲ့ လားဆိုတာကို ကွညျ့ရမှာပါ။ တဈခါတဈခါကွရငျ အာမခံဟာ ထုတျတဲ့ကုမ်ပဏီက ပေးတယျဆိုတာထကျ ဒီကငျမရာကို ယူ ရောငျးတဲ့ ဆိုငျက ပေးတာမြိုး ဖွဈတတျပါတယျ။ ဥပမာစငျကာပူကဝယျလာတဲ့ ကငျမရာကို တခွားနိုငျငံတဈနိုငျငံမှာ ပွငျမယျ ဆိုရငျ အာမခံမရတာမြိုး ဖွဈနိုငျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ အာမခံသကျတမျးကနျြသေးတယျဆိုတိုငျး အရမျးမဝယျပဲ သခြောလေ့ လာကွညျ့ဖို့ လိုပါမယျ။
Author elijahhtangPosted on October 30, 2015 November 17, 2015 Categories Other
Previous Previous post: လူမူကွန်ယက်များအသုံးပြုမူ မြင့်တတ်လာခြင်းနှင့် တိုးတက်ပြောင်းလဲမူများ ( Infographic )
Next Next post: မြန်မာပြည်တွင်း ဒီဂျစ်တယ်အသုံးပြုမူနူန်းနှင့် အသုံးပြုသူအများဆုံးလူမူကွန်ရက်များ ( Infographic)